Barreesa siyaasaa Bahailu Girma siyaasii dargi iftomina hin qabuu iftomina qabachuu qaba jeedhe. “ Garaan Tigire fi karan Mistiwaa tokko” jeedhe iftominii hin jiruu waan hundi dhoksaadha kun siirefamuu qaba jeedhe warreegama kaffale. Abdi Fiixe ammo torban darbe እንታገልላሃለን በሚሉት ህዝብ ጀርባ ላይ ተንጠልጥለዉ ተዝቆ ወደማያልቀዉ ሀብት ለመሸጋገር የሚታገሉ ታጋዮችን አፍርተናል:: … የ'ኔ ተቃዉሞ ያለዉ የሚታገሉለት አላማ በሀብታቸዉ ልክ ወይንም መጠን መሆኑ ነዉ:: የግል ጥቅማቸዉ ላይ ተመርኩዘዉ መንቀሳቀሳቸዉ ነዉ:: ይህ ደግሞ ዛሬ ባይመስለንም ነገ እንደ ህዝብ ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል:: ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በጀርባ በር እየነገዱ ከፊትለፊት የሚቃወሙ ፖሎቲከኞችን ሳይ ከደሞኞቹ ባለስልጣናት ይልቅ እነዝህ ሰዎች ናቸዉ የልብ ህሜምን የሚቀሰቅሱት:: jeedhe barreese kun waan gudadha. Namni sodaan qabamee waa barreesuu fi waa qeequu dhiseera, ykn ammoo inni bareesuu danda’uu fi beekuu iyuu malamalltuman qabamee yakka dalagamu barreesuu dhiseera. Namni Wa’ee Oganoota keesumatti wa’ee Abbooti Amanta fi waan amantan walqabatee bareesun akka waaqayyo balaleefataniti ilaalani sodaataa jiru. Mika’el Gorbachoof Mootummoon USSR iftomina hin qaban iftomini dhufuu qaba yeroo inni jeedhe warii kan immoo iftomini ati jeetu kun yoo dhufee USSR ni diigamti jeedhan USSR haadigamtuu malee iftomini dhufuu qaba jeedhe, akkuma jeedhe Iftomini Gorbachf USSR diige biyya 15 goodhe. Kara caaben hayyatuu malee sodaa of irra molqani dhuga dubatan (barreesan) warreegama kaffalu wayya.
Musilima Alhabashi Melese Zenawi Musilima mata isaa biyyaa Libannosti gurmessun Musilima isaaf tajajjilu ijaree biyyaa glchuu isaa dursee odeefama ture garuu dhimma kana kan ibsuu documentiin ‘Tigre's secret document on Islam and nations” jeedhu fulii 42 kan na ga’ee 04/06/12 at 8:15 ture. Namni yeroo caalisuu inni kana immoo waan hin beekne nama godha. Yeroodhuma sana Amanta isalama Melese Zenawi diiguuf deema jeene yeroo iyyachu egalu ati ammoo mana malii maltuu amanta musilima keessa sii galchee kkf nu irraatti boba’an dursani kan egalan ergamtoota wayyaneti kan, warii goowan isaanuma ilaalani nuti dulan. Bulee Olee garuu dhugan mulatee Sagaleen keenya haadhaga’amuu jeechuun uummani musilima faalmachuu egalee hanga amma falmata jira. ALhabashi yeroo amma kana TPLF (Hiwahat) ta’ee jira.
Habasha waliin yoo ta’ee malee waari jeetan, gorsa fi yaada Oromoo irra Habasha gaafi fi deebin media Oromoo irratti dhiyeesitan irra waan gurii Oromoo hin fudhanen nu hin rakisina, Waan habashan isiinti himtee bareesitan xinxala siyaasaa jeetan nuti hin fidiina, Oromootu siyaasaa Habasha dura barate rakkotu akka baranuu nu goodhe ittin sormuuf miti. Kana boode dhabadha isiinin jeena abba feete yoo tatee. Ijoolee Oromootu du’aa jira Finfinne irrati. Amhari isiin fira keenya jeetan ammoo Finfinne kan Oromoo miti, Walqati ilee kan Tigire miti jeedhe dhadanoo bate dhadachaa jira. Nafxanyootni naannoo Cirio, Asallaa waan naannoo Gonderitti ta’een onnatanii of ijaaruuf fiffiiguun irra jiru. Dhaadannoon Finfiinnen kan Oromiyaa miti jeedhu kun Amhara gatii guda kafallchisa. Siyaasii Amhara fi Qunammmti isaan Oromoo waliin qabatan asii irrati du'aa. Habashan (Amharsi ta'ee Tigiren) Oromoof kabaja hin qaban. Oromoon ammoo isaan waliin mari’achuu qabna, waliin hojeechuu qabna, waliin TPLF buqisuu qabna kkf odeefama jiru, gorsii fi burjajjeesuun akkasi kun Oromoo irra dhabachuu qaba.
Finfinneen kan Oromoo miti erga jeedhan bori Gimbi fi Jimma ilee kan Oromoo miti jeedhu. Jarii siyaasaa hin beekan TPLF lolu dhisan Oromoo irratti dhadachuun isaan kun siyaasaa Amhara keessa TPLF harka naqachuu ishee argisisa. Amhari gaafi haqaa Tigiray irra qabu wa’ee Walkaiti falmachuu dhisan wa’ee Finfinnee waliin walti hidhun isaan siyaasaa Amhara, siyaasaa PG7 hunda balessa, kun siyaasaa miti, ykn TPLFtu Amhara fakkatee kana qoophesee ta'aa Amari fi Dhaabilee Amhara kana irratti ifaa ba'ani Oromoo dhiifama gaafachu banaan sabi Amhara Oromoo fi Tigire giduuti rukutama. Yoo kana hin goone ta’ee Tigiretuu qoophese ta’ee kana enyuma jara saxilan isaan akka hin tanee ibsuu qabu. Lammiin kami iyuu hanga yoonati Oromiyaa keessa qubatee naggaan jiracha jira, naggaan isaan jirachisuun keenya ammoo abba biyyuma nu dhabsisu hin qabu. Kanaafuu Finfinne kan Oromoo miti warii jeedhani fi warii ilaalcha akkasi qaban gutuumaa Oromiyaa kessa ba’uu qabu sababin isaa nama yakka raawwatuuf deemuu caalisan ilaalun bala qaba Qeerron Oromoo Polisin Oromiya kana hordofuu qabu.
Amhari Finfinne kan Oromoo miti, Walqati ilee kan Tigire miti jeedhe dhadanoo bate dhadacha jira. Nafxanyootni naannoo Cirio, Asallaa waan naannoo Gondaritti taheen onnatanii of ijaaruuf fiffiiguun jira. Dhaadannoon Finfinneen kan Oromiyaa miti jeedhu kun Amhara gatii guda kafalchisa. Siyyasi Amhara fi Qunammmti isaan Oromoo waliin qabatan asii irrati du'aa. Habashan (Amharsi ta'ee Tigire) Oromoof kabaja hin qaban. Oromoon amoo isaan waliin mariachuu qabna, waliin hojeechuu qabna, waliin TPLF buqisuu qabna kkf odeefama jiru gorsii fi burjajeesuun akkasi kun Oromoo irra dhabachuu qaba.
Kun isaanti utuu hin xinatiin, Naannoo Oromiyaatti Finfinnee, Magaalota Gugurddoo Godinaalee 18 fi Magaalota armaan gadii dabalatee kan birootii Hojii basaastummaaf kan ramadamaan dhalattoonni Tigiree fi namoonni amanamoon sirnichaa hojii garagaraa jiddugaleessa godhachuun Oromiyaa keessatti rabsamuu beekme jira. Namoonni kunnniin kan ramadaman qajeelloon dhaaba siyaasaa dhoksaan dhiiga Oromootaa dhugaa ture 'Federal Dehininnat & Mereb Agalgilot' kan jedhamuun. Irra caalaan isaanii Baajajii fi Taaksii konkolaachisuu, hojjatoota hoteelotaa, Daldaltoota qinxaaboo, kanneen meeshaa baadhatanii ganda keessa iyyaa deeman, kadhattoota daandii irraa, Maraattuu kanneen fakkaatanii daandii irra deeman,manneen amantaa, manneen barnootaa, afooshaalee garagaraa, IMX, waajjiraalee Mootummaa fi bakkeewwan namni itti baay'atu hundatti kan ramadamanii fi yeroo yeroon kan jijjiramaniidha. Dubbiin tun akkaan yaaddessaa ta'uu bartanii waan naannawa keessanitti hojjatama jiru ija gariitiin ilaaluun tarkaanffii qaamni biraa isaan irratti fudhatu tokkooyyuu osoo hin eegin dursuun yeroo barbaachisu keessatti tarkaanffii laalessaa irraatti fudhachuun wereegama akka kafalchiiftan isiinf dhama jiru.
Waluma galati Qeeqa kana hunda yeroo barreesinu wal balalleefachuuf miti dogoggra jiru dhoksuu irra siiriti dubatan wal amansisan tokkuman, walamantan qama tokko ta’aan hojjeechuu wayya. Walhamachuu fi wal shakuu irra dogoggra jiru walti himani wal gorfata fi wal barrsisa deemuu wayya. Dhaabbileen Oromoo ibsa basuu irra meesha qeerroon ittin hidhannoo TPLF irra fudhachuuf itti egaltu meesha bituu qabu, warii feedhi qabdan yoo nu garggartan meesha nu bitaan dargaggoon loluf qoopha’a jira sababin isaa furmatii biran hin jiru. Oromoo keessatu Qeerroon caara argateen meesha harka isaa galcachuu qaba. Abootin Qabeenya Oromoo meesha bitadha fira keessanfsi bita, Ijoolee Qeeroofsi Meesha bita hidhachisa guyyaa tokko isiinf kafallama. Qeerroo atiisi diina sammii meesha bitadhuu harka qula hin du'iin.